Imifino ye-jewelers ayinakuphela - ihlanganisa izilwane, izinyoni, izimbali, amagama, ngisho nemizwelo ensimbi. Kodwa akukho mkhawulo ekupheleleni - ukuphenduka kwezisekelo zesayensi yemvelo sekufikile. I-albhamu entsha ye-Avgvst ne-avant-garde artist "Prosus Temen" i-Space Atlas "ayihambisani nakakhulu - ukuhamba kwezinhlayiya emzimbeni womuntu nangaphezulu.
Izenzo ezintsha ze-Promofoto zokuqoqwa kwendawo yomlobi avgvstproteytemen.com
Ukuhlobisa ababusi kunencazelo ejulile yefilosofi - nabo bayakhanga ukunakwa. Ngempela, kukhona amacici amaningi ajwayelekile - ngisho namatshe, nakuba anezintambo ezinamapayipi noma izakhi ezengeziwe. Kodwa i-monoterge "i-Comet" - i-hit ye-"uchungechunge" lwesayensi - ngokushesha iba yinto enesifiso: "umsila" wegolide e-earlobe ufakazela kahle kakhulu. Futhi indaba enjalo - nanoma yimaphi ama-accessory wokubambisana. Ubuhle be-Needle no-openwork, obufanekisela ukuwa noma ukunyakaza kwama-particle, ama-medallion amancane ngesimo se-orbit noma inkanyezi yeplanethi, amagagasi okumiswa, amasongo avulekile nezimpawu, ezibonisa ngeso lengqondo umqondo wendawo - ukuqubuzana kwe-intelligence eyinkimbinkimbi.
Amagugu avelele - abesifazane besimfashini abangenandaba ne-physics
Izesekeli zangempela zingagqokwa ngokwehlukana noma zihlangene zibe ngama-headsets
Ihluzo ezilungile zifaka emhlobiso weqoqo isipho esikhethekile. Kulula ukucabanga njengezimpawu ezingavamile zesithombe se-Kazehal: amafomu alula, ukufakwa koqweqwe lwawo omnyama, ukukhanya okulula kwegolide lelimon. Akukho okweqile nje okungukuthi kuncane kakhulu okuncane.
Umkhankaso wokukhangisa u-Avgvst + Rrotey Temen
Umlando wemizwa: iqoqo lezinhlobonhlobo zonke Ukuwa / Ubusika 2016-2017
Umhlobiso wehlobo: I-TOP-3 izitayela ezinhle-2017
Indlela yokugqoka izinwele zakho ekhaya
Intombazane enamandla igqoke umfana ezandleni zakhe
Ama-muffins amancane ane-sinamoni
Kunokuba ukujabulisa intombi ngonyaka onyakeni?
Lapho iholidi le-Uraza Bairam liqala ngo-2016
Uketshezi kokudla nokuvimbela kwabo
Uhlelo, umklamo omuhle wezithombe zezingane
Indlela yokunikeza intombazane injabulo - iphuzu g
I-Victoria Daineko endala yayilungele ukugubha
Ikhekhe kuhhavini ye-microwave
Intombazane ayikwazi ukungena ngemvume embhedeni
I-almond pie enezikhonkwane